Qaybtii ugu horeysay ee dhaawicii dagaalka Kalshaale oo la keenay magaalada Galkacyo. – Radio Daljir
Febraayo 9, 2011 12:00 b 0
Galkacyo, Feb 08 – 19 qof oo ku dhaawacmay dagaalkii shalay ka dhacay balliga Kalshaale ee gobolka Cayn ayaa saaka aroortii la soo gaarsiiyey magaalada Galkacyo; dhaawaca ayaa lagu dabiibayaa cisbitaalka guud ee magaalada Galkacyo.
Agaasimaha guud ee cisbitaalka ayaa sheegay in dhaawaca intiisa badani ay ladan yihiin, xaaladooda caafimaadna ay deggan tahay; waxaa uu sheegay in ay jireen 2 nin oo ka tirsanaa dhaawaca oo geeriyooday markii cisbitaalka la keenay.
Dadweyne aad u fara badan oo ka welwelsan xaalada caafimaad ee dhaawaca ayaa soo buux-dhaafiyey cisbitaalka, iyaga oo gargaar u fidinaya ragga dhaawaca ah.
Dagaalka Kalshaale ayaa gaystay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo aad u badan; inkasta oo maanta aanay wax dagaal ahi dhicin, goobihii dagaaladu shalay ka dheceenna ay deggan yihiin, ayaa hadana waxaa dul hoganaya gobollada Sool & Cayn daruuro colaadeed.
Dagaal khasaare gaystay oo Kalshaale ku dhex maray ciidan beeleedka gobolka Cayn & ciidanka Somaliland.
Buuhoodle, Feb 07 – Dagaalka oo hiirtii hore ee saaka ka bilawday duleedka balliga Kalshaale ee gobolka Cayn ayaa waxaa isaga horyimid ciidan beeleedka gobolka Cayn iyo ciidamada Somaliland oo bishii hore fariisimo ciidan ka samaystay Kalshaale.
Inta la og yahay, waxaa ku dhintay dagaalka saaka soddomeeyo (30+) qof oo labada dhinac ah, halka dhaawacana lagu sheegay in uu gaarayo kontomeeyo (50+) qof; waxaana la xaqiijiyey in dhaawac lixaad leh la kala geeyey magaalooyinka Buuhoodle, Cayn iyo Burco, Togdheer.
Wararka waxaa ay sheegayaan in balliga Kalshaale ay hadda gacanta ku dhigeen ciidan beeleedka gobolka Cayn, halka kuwa Somaliland-na ay ku sugan yihiin Qorulugud oo hore fariisin ugu ahayd.
Sidoo kale, waxaa jira dhaqdhaqaaq ciidan oo ka socda bariga iyo galbeedka gobolka Sool oo ay fariisimo ciidan ku leeyihiin ciidamo beeleed u dhashay deegaanka.
Ciidamo ay kala hogaaminayaan Axmed Karaash iyo Col. Deyr ayaa iyana la sheegay in ay kaabiga u saaran yihiin magaalada Laascaanood ee gobolka Sool.
Kalshaale ayaa bishii Nofembar waxaa uu iska-horimaad ku dhex maray 2 ardaa oo ood-wadaag ah, khilaafkooduna uu ku salaysnaa baraago ay ka qoteen balliga Kalshaale reer guuraa ka soo jeeda gobolka Togdheer; wada-xaajood labada dhinac ah oo la isku dayey ayaa fashilmay.